Kaliya lagu daray gaarigaaga
Muuqaalka sawirka ()
Safarka Visa ee Bilaashka ah
Yaa dalban kara
Ilaalinta Xogta & Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
St. Lucia - Xaqiiqada iyo Tirakoobka
Saint Lucia, oo noqotay waddan madax-bannaan / dowlad markay ahayd Febraayo 22, 1979.
Magaalada caasimada ah (Castries) waxay ku taalaa qaybta waqooyiga jasiiradda waxayna matalaysaa qiyaastii 40% dadka.
Xarumaha kale ee waaweyn ee dadweynaha waxaa ka mid ah Vieux-Fort iyo Gros-Islet.
Cimilada iyo Cimilada
St Lucia waxay leedahay cimilo kulul, kuleyl ah sanadka oo dhan, oo ay isku dheelitiraan dabeylaha ganacsiga waqooyi-bari. Celceliska heerkulka sanadlaha ah waxaa lagu qiyaasaa inta udhaxeysa 77 ° F (25 ° C) iyo 80 ° F (27 ° C).
Daryeelka caafimaadka ee laga bixiyo dalka oo dhan. Waxaa jira soddon iyo saddex (33) Xarumood oo caafimaad, seddex (3) cisbitaalada guud, hal (1) isbitaal gaar loo leeyahay, iyo hal (1) cosbitaalka dhimirka
Sannad-waxbarasheedka wuxuu bilaabmayaa Sebtember wuxuuna dhammaanayaa Luulyo. Sannadku wuxuu u qaybsan yahay saddex xilli (Sebtember ilaa Diseembar; Janaayo illaa Abriil iyo Abriil illaa Julaay). Gelitaanka dugsiga jasiiradda waxay u baahan tahay bixinta ardayda iyo waraaqaha xaadiritaanka ee dugsiyadooda hore.
Isboortiga ugu caansan ee lagu ciyaaro jasiiradda waa cricket, kubada cagta (kubbadda cagta) tennis, kubbadda laliska, iyo dabaasha. Ciyaartoydeena ugu caansan waa Daren Garvin Sammy, Kabtanka kooxda West Indies Twenty20 Team; Lavern Spencer, bood dheer iyo Dominic Johnson, vault vault.
Nooca gaarka ah
Pitons waa laba buurood oo buuraley ah dhulkeenna adduunka dhaxdeeda ee ku yaal St. Lucia, oo ay ku xiran tahay fiin la yiraahdo Piton Mitan. Labada buurood ee Piton waa laga yaabaa inay yihiin muuqaalka ugu sawirka badan jasiiradda. Midda weyn ee labadan buurood waxaa la yiraahdaa Gros Piton midka kalena waxaa loo yaqaannaa Petit Piton.
Saldhigga caanka ah ee 'Sulfur Springs' waa aagga ugu kulul uguna firfircoon uguna firfircoon xagga Antilles Ka Yar. Xadiiqadu waa qiyaastii 45 hektar waxaana loo soo sheegaa inay tahay Volcano-ka Caribbean-ka ee kaliya. Waxaa jira barkado kulul oo dadku sameeyay oo ay dadka deegaanka iyo booqdayaashu si isku mid ah ugu celceliyaan guryaha bogsashada ee macdanta leh.
Saint Lucia waxay leedahay kala duwanaanta haysashada tirada ugu badan ee abaalmarinaha Nobel ee qofkiiba laga helo adduunka. Derek Walcott wuxuu ku guuleystay Nobel Prize suugaanta sanadkii 1992 halka Sir Arthur Lewis uu isna ku guuleystey Nobel Prize ee dhaqaalaha 1979. Labada guuleyste waxay wadaagaan isla dhalashadii Janaayo 23, kaliya 15 sano ayaa u dhaxeysa.
Tirada dadka: Ku dhowaad 183, 657
Bedka: 238 sq miles / 616.4 sq km
Luuqada Rasmiga ah: Ingiriis
Luqadda Maxalliga ah: Faransiis Creole
GDP per Capita: 6,847.6 (2014)
Wax-qorista dadka waaweyn: 72.8% (Tirakoobka 2010)
Lacagta: Dollarka Bari ee Bariga (EC $)
Sicirka Bedelka: US $ 1 = EC $ 2.70
Aagga Waqtiga: EST +1, GMT -4
AAAA TALOOYIN • CIU & CIP & CBIU & CBI AGENT
Jinsiyadda labaad iyo Baasaboor ay ku leeyihiin Wakaaladda Socdaalka Maalgashiga • Jinsiyadda St. Kitts • Dhalashada St. Lucia
Arthur Evelyn Dhismaha Charlestown, Nevis, St. Kitts iyo Nevis
Dhalashada Saint Lucia xiriirimaha dhakhsaha badan:
XIGASHO -19 ISKU XIDHIIDHKA
Mashaariicda Guri Iibsiga
Sanduuqa Dhaqaalaha ee Saint Lucia
St. Lucia - Dhaqaalaha
St. Lucia - Kobcinta Ganacsiga
St. Lucia - Nolosha & Madadaalada
2021, Dhalashada Saint Lucia Kana sheekayso
Isticmaal waraaqaha bidixda iyo midigta si aad u raacdid sawirada ama ku dhufo bidix / midig haddii aad isticmaalayso qalab mobile
Doorashada xulashada natiijooyinka bog cusub ayaa dib u cusbooneysiinaya.
Riix furaha booska ka dibna furaha fallaarta si aad u xulato.